Shir ka socda Kismaayo oo looga arrinsanayo halkii lagu qaban lahaa doorashada kuraas taala Garbahaareey – XAMAR POST
Wararka aan ka heleyno magaalada Kismaayo waxay sheegayaan in halkaasi uu kulan uga soconayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyo ku xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka gedo.
Wararku waxay sheegayaan in kulankan looga hadlayo goobta lagu qabanayo doorashada 16-ka kursi ee deegaan doorashadoodu tahay magaalada Garbahaareey oo xalay Guddiga doorashada maamulka Jubbaland ay shaaciyeen.
Xog aan helnay ayaa sheegysa in MW Jubblaand ku talinayo in doorashada kuraastan lagu qabto degmada Ceelwaaq, halka siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Gedo ay ku doodayaan in la ilaaliyo heshiiskii 17kii Septemper oo qeexayay in doorashada lagu qabto deegaan doorashada labaad oo ah magaalada Garbahaareey ee xarunta Gobolka Gedo.
Waxaa la dhowrayaa waxyaabaha kulankan kasoo bixi doona, iyadoo cirka isku sharerayo khilaafka u dhaxeeya hogaanka Jubbaland iyo kan gobolka Gedo ee ku saabsan doorashooyinka golaha shacabka.
Diiwaangelinta musharixiin u tartameysa kuraas oo ka bilaabaneysa Garoowe